A bee covered with pollen hooks itself ontoapetal ofabluebell inagarden, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in West London, Britain, April 23, 2020.
ဒီတပတ်တော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်မှု ရှိမရှိ ပျားတွေနဲ့စမ်းသပ်ဖို့ သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေ ကြိုးစားနေတဲ့ အကြောင်း ပြောပြပေးမှာပါ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု တတိယလှိုင်းဒဏ် ခံစားနေရချိန်မှာ ပျားကောင်လေးတွေကို သုံးပြီး ဒီရောဂါပိုးကူးစက်မှု ရှိမရှိ အမြန်စမ်းသပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ဂျာမဏီက သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ရှာဖွေနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပိုးအကူးစက်ခံရသူဆီက ယူထားတဲ့ sample နမူနာနဲ့ တွေ့ရင် ပျားကောင်ကလေးတွေက နှာမောင်းနဲ့ တူတဲ့ သူတို့ရဲ့ဝတ်ရည်စုပ်တံ ကလေးတွေနဲ့ လာစမ်းအောင် သူတို့ကို လေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်လို့ ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဗားနင်ယံWageningen တက္ကသိုလ် ဗိုင်းရပ်စ်သုတေသနဌာနက ပါမောက္ခ Wim Van Der Poel က ပြောပါတယ်။
“ဒီဒေသထဲမှာရှိတဲ့ ပျားမွေးမြူတဲ့သူတွေဆီက ပျားတွေကို ကျနော်တို့ လိုက်စုဆောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ဒီပျားတွေကို နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ပေးပါတယ်။ သူတို့ကို အကန့်ကလေးထဲမှာထိန်းထားပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပိုးရှိတဲ့ နမူနာနဲ့ ပိုးကင်းတဲ့ နမူနာတွေ နဲ့ထိတွေ့စေပါတယ်။ ပိုးရှိတဲ့ နမူနာနဲ့ တခါထိတွေ့ပြီးတိုင်း သကြားရည်ကို ပေးပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပိုးပါတဲ့ နမူနာနဲ့ တွေ့တိုင်း ပျားးကသူ့ ဝတ်ရည်စုပ်တဲ့နှာမောင်းကို ဆန့်ပြီးလိုက်စမ်းပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ပျားတွေကို ခပ်မြန်မြန်လေး လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။”
အင်းဆက်ပိုးတမျိုး ဖြစ်တဲ့ ပျားကို တခြားသတ္တဝါတွေလိုပဲ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အချိန်အတော်ကြာကတည်းက လေ့လာ သိရှိထားကြတာပါ။
လန်ဒန် Queen Mary တက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ စမ်းသပ်မှုမှာတော့ မှန်ပြားအောက်မှာ ပျားစားတဲ့အစာကို မြင်အောင် ပြထားပြီး မှန်ချပ်ထိပ်ဖက်မှာတော့ အစာနဲ့တွဲထားတဲ့ ကြိုးစကိုထုတ်ပေးထားပြီး သင်ပေးခဲ့တာပါ။ ပျားအကောင် ၄၀ လောက်မှာ ၂၃ လောက်ကို ဒီအစာချိတ်ထားတဲ့ ကြိုးကို ဆွဲထုတ်ပြီး အစာကို ရအောင်ယူဖို့ အောင်အောင်မြင်မြင် သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ကြောင့် ၂၀၁၆ မှာ စမ်းသပ်ပြသခဲ့ပါတယ်။
အကောင်သေးတဲ့အတွက် ဦးနှောက်အရွယ်ကလည်း သေးပြီး နှမ်းစေ့အရွယ်လောက်ပဲ ရှိနေပေမယ့် ဒီပျားတွေကို အထင်သေးလို့တော့ မရပါဘူး။ သူတို့ဟာ လူလိုပဲ အတတ်ပညာသစ် ရအောင် သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိသလို တခြားသူကိုလည်း သင်ကြားပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ် ဆိုတာကို သူတို့ တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ပျားတွေမှာ သိမြင်တတ်တဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ဥာဏ်ရည်ရော သင်ယူနိုင်စွမ်းပါ ထင်တာထက် ပိုသာနေတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ပျားကလေးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် သင်ယူနိုင်သလို တခြားပျားတွေကိုလည်း အလားတူ လုပ်နိုင်အောင် သူတို့က သင်ပေးနိုင်စွမ်းလည်း ရှိနေတာပါ။
ဒါကြောင့် အခု Covid 19 ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စစ်ဆေးမှုတွေ အတွက်ဒီလိုပျားတွေကို သုံးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့. ဗားနင်ယံWageningen တက္ကသိုလ်က ရောဂါပိုးမွှားဗေဒ ပါမောက္ခ Wim Van Der Poel က ပြောပါတယ်။
"ဒီလိုစမ်းသပ်ဖို့ ပျားကိုသုံးတာ သိပ်ကို အသုံးတဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အကုန်အကျ အတော် သက်သက်သာသာနဲ့ ပျားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးနိုင်လို့ပါ။ နောက်ပြီး ဒေသတခုမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ မရနိုင်ဘူးဆိုရင် တံတွေးလို နမူနာမျိုးတွေမှာ ပိုးရှိမရှိ ပျားတွေကို အနံ့ခံ ခိုင်းလို့ရတဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။”
ဒီလို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိ စမ်းမယ်ဆိုရင် စမ်းသပ်မှုအဖြေကို မိနစ်ပိုင်း အတွင်းမှာပဲ ထုတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခုထက်ပိုပြီး သင်ပေးနိုင်အောင် ပိုကောင်းတဲ့ လေ့ကျင့်တဲ့စက်ရအောင် လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
"ပျားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ အချိန်သိပ်မလိုပါဘူး၊ တလလောက် အတွင်းမှာပဲ ရနိုင်ပါတယ်။ အခက်ဆုံး အပိုင်းကတော့ ပျားတွေကို ဒီလိုလုပ်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာ ပြဖို့ပါ။ ဒီလို ပြနိုင်ပြီဆိုရင် ရှေ့ဆက် လုပ်ဖို့သိပ်မခက်တော့ပါဘူး။ ဒီ့အတွက် ပျားတွေကိုထည့်ပြီး ထိန်းထားနိုင်မယ့် လေ့ကျင့်တဲ့စက်ကို ခုထက်ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ - ထွင်ဖို့လိုပါတယ်။”
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပိုးရှိမရှိ စမ်းသပ်တဲ့နေရာမှာ အဖြေရဖို့ နာရီနဲ့ချီပြီးစောင့်ရသလို တခါတလေ ရက်နဲ့ချီပြီး ကြာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျားနဲ့ စမ်းသပ်ရင်တော့ အဖြေကို ချက်ချင်းပဲ ရနိုင်တာပါ။ ဒီလို ပျားနဲ့စမ်းသပ်တဲ့နည်းဟာ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သိပ်မများတဲ့ အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်စမ်းသပ်တဲ့ ပစ္စည်း kits ရဖို့ ခက်ခဲတဲ့ နိုင်ငံတွေ အတွက် သိပ်ကို အသုံးတဲ့နိုင်တယ်လို့လည်း သုတေသန ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ Ghent တက္ကသိုလ် ပျားမွေးမြူရေးဌာန အကြီးအကဲ ဇီဝဗေဒပါမေက္ခ Dirk de Graaf ဂရပ်ဖ် ကတော့ အခုလို အင်းဆက်ပိုးတွေနဲ့ အနံ့ခံခိုင်းတဲ့ နည်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံက ကာကွယ်ရေးဌာနမှာ ထိထိရောက်ရောက် စမ်းသပ်နေတာ ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ၁၉ ၉ ၀ နှစ်တွေ အတွင်းမှာ ဖေါက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေ၊ ဓါတုအဆိပ်တွေရှိမရှိ ထောက်လှန်းတဲ့ နေရာမှာ သုံးခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ Covid 19 အတွက် သမရိုးကျနည်းတွေသုံး စမ်းသပ်တာကိုပဲ သဘောကျတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"ဒီ အကြံက သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရောဂါပိုး ရှိမရှိ စမ်းသပ်ဖို့အတွက် ပျားကို သုံးတာထက် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ပစ္စည်းတွေသုံး စမ်းသပ်တာကို ကျနော်ပိုကြိုက်ပါတယ်။ ကျနော်က ပျားတွေကို သိပ်ချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို Covid 19 ပိုး ရှိမရှိ စမ်းဖို့ သုံးမယ့်အစား တခြားကိစ္စတွေ အတွက်ပဲ ကျနော်သုံးချင်ပါတယ်။"
ဒါ့အပြင် ဒီကပ်ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအတွက် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း တိုက်ရိုက်ပဲ. ဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိ စမ်းသပ်တာကပဲ စိတ်ချရမယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
"ဒီမှာတွေ့ရတာကတော့ ဒီပျားတွေက ရောဂါ အကူးစက်ခံရသူ ဆီက ထွက်တဲ့ အနံ့ကိုပဲ ခံကြတာပါ။ အခုလို ပျားနဲ့ စမ်းသပ်တာက တိုက်ရိုက်စမ်းတဲ့နည်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တိုက်ရိုက်ပိုကျတဲ့နည်းက COVID-19 ပိုးရှိမရှိ စမ်းသပ်တဲ့ကရိယာတွေနဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် စမ်းသပ်တဲ့ နည်းတွေပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့ အနေအထား အသွင်အပြင် ဒါမှမဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့ မျိုးဗီဇကို စမ်းသပ်တာမျိူးပါ။”
ပျားရည်ထုတ်ပေးတဲ့ ဒီပျားကောင်လေးတွေနဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် ဗိုင်းရပ်ပိုးစစ်ဆေးတဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေသလို ဒီပျားထွက်ပစ္စည်း ဖြစ်တဲ့ ပျားရည်၊ ပျားဖယောင်း၊ ပျားအဆိပ် တွေသုံးပြီး ဒီရောဂါကို ကုသပေးနိုင်ဖို့ သုတေသနတွေ လုပ်နေကြတယ် ဆိုတာ တင်ပြရင်း ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ ကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
ဒီတပတျတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုး ကူးစကျမှု ရှိမရှိ ပြားတှနေဲ့စမျးသပျဖို့ သိပ်ပံ ပညာရှငျတှေ ကွိုးစားနတေဲ့ အကွောငျး ပွောပွပေးမှာပါ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှု တတိယလှိုငျးဒဏျ ခံစားနရေခြိနျမှာ ပြားကောငျလေးတှကေို သုံးပွီး ဒီရောဂါပိုးကူးစကျမှု ရှိမရှိ အမွနျစမျးသပျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးကို ဂြာမဏီက သိပ်ပံပညာရှငျတှေ ရှာဖှနေတော ဖွဈပါတယျ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပိုးအကူးစကျခံရသူဆီက ယူထားတဲ့ sample နမူနာနဲ့ တှရေ့ငျ ပြားကောငျကလေးတှကေ နှာမောငျးနဲ့ တူတဲ့ သူတို့ရဲ့ဝတျရညျစုပျတံ ကလေးတှနေဲ့ လာစမျးအောငျ သူတို့ကို လကေ့ငျြ့ပေးလို့ ရတယျလို့ ဂြာမဏီနိုငျငံ ဗားနငျယံ Wageningen တက်ကသိုလျ ဗိုငျးရပျဈသုတသေနဌာနက ပါမောက်ခ Wim Van Der Poel က ပွောပါတယျ။
“ဒီဒသေထဲမှာရှိတဲ့ ပြားမှေးမွူတဲ့သူတှဆေီက ပြားတှကေို ကနြျောတို့ လိုကျစုဆောငျးပါတယျ။ ပွီးတော့ဒီပြားတှကေို နတေို့ငျးလကေ့ငျြ့ပေးပါတယျ။ သူတို့ကို အကနျ့ကလေးထဲမှာထိနျးထားပွီး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပိုးရှိတဲ့ နမူနာနဲ့ ပိုးကငျးတဲ့ နမူနာတှေ နဲ့ထိတှစေ့ပေါတယျ။ ပိုးရှိတဲ့ နမူနာနဲ့ တခါထိတှပွေီ့းတိုငျး သကွားရညျကို ပေးပါတယျ။ ဒီတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပိုးပါတဲ့ နမူနာနဲ့ တှတေို့ငျး ပြားးကသူ့ ဝတျရညျစုပျတဲ့နှာမောငျးကို ဆနျ့ပွီးလိုကျစမျးပါတယျ။ ဒီနညျးနဲ့ ပြားတှကေို ခပျမွနျမွနျလေး လကေ့ငျြ့ပေးနိုငျပါတယျ။”
အငျးဆကျပိုးတမြိုး ဖွဈတဲ့ ပြားကို တခွားသတ်တဝါတှလေိုပဲ လကေ့ငျြ့သငျကွား ပေးနိုငျတယျ ဆိုတာကို သိပ်ပံပညာရှငျတှေ အခြိနျအတျောကွာကတညျးက လလေ့ာ သိရှိထားကွတာပါ။
လနျဒနျ Queen Mary တက်ကသိုလျက သိပ်ပံပညာရှငျတှရေဲ့ စမျးသပျမှုမှာတော့ မှနျပွားအောကျမှာ ပြားစားတဲ့အစာကို မွငျအောငျ ပွထားပွီး မှနျခပျြထိပျဖကျမှာတော့ အစာနဲ့တှဲထားတဲ့ ကွိုးစကိုထုတျပေးထားပွီး သငျပေးခဲ့တာပါ။ ပြားအကောငျ ၄၀ လောကျမှာ ၂၃ လောကျကို ဒီအစာခြိတျထားတဲ့ ကွိုးကို ဆှဲထုတျပွီး အစာကို ရအောငျယူဖို့ အောငျအောငျမွငျမွငျ သငျကွားပေးနိုငျခဲ့ကွောငျ့ ၂၀၁၆ မှာ စမျးသပျပွသခဲ့ပါတယျ။
အကောငျသေးတဲ့အတှကျ ဦးနှောကျအရှယျကလညျး သေးပွီး နှမျးစအေ့ရှယျလောကျပဲ ရှိနပေမေယျ့ ဒီပြားတှကေို အထငျသေးလို့တော့ မရပါဘူး။ သူတို့ဟာ လူလိုပဲ အတတျပညာသဈ ရအောငျ သငျယူနိုငျစှမျးရှိသလို တခွားသူကိုလညျး သငျကွားပေးနိုငျစှမျးရှိတယျ ဆိုတာကို သူတို့ တှရှေိ့ခဲ့တာပါ။ ပြားတှမှော သိမွငျတတျတဲ့ ရှုပျထှေးတဲ့ဉာဏျရညျရော သငျယူနိုငျစှမျးပါ ထငျတာထကျ ပိုသာနတေယျဆိုတာကို တှရှေိ့ခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ ပြားကလေးတှဟော သူတို့ကိုယျတိုငျ သငျယူနိုငျသလို တခွားပြားတှကေိုလညျး အလားတူ လုပျနိုငျအောငျ သူတို့က သငျပေးနိုငျစှမျးလညျး ရှိနတောပါ။
ဒါကွောငျ့ အခု Covid 19 ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စဈဆေးမှုတှေ အတှကျ ဒီလိုပြားတှကေို သုံးမယျဆိုရငျ အဆငျပွနေိုငျတယျလို့. ဗားနငျယံ Wageningen တက်ကသိုလျက ရောဂါပိုးမှားဗဒေ ပါမောက်ခ Wim Van Der Poel က ပွောပါတယျ။
"ဒီလိုစမျးသပျဖို့ ပြားကိုသုံးတာ သိပျကို အသုံးတဲ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ အကုနျအကြ အတျော သကျသကျသာသာနဲ့ ပြားတှကေိုလကေ့ငျြ့ပေးနိုငျလို့ပါ။ နောကျပွီး ဒသေတခုမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုး ရှိမရှိ စမျးသပျစဈဆေးတဲ့ ပစ်စညျးတှေ မရနိုငျဘူးဆိုရငျ တံတှေးလို နမူနာမြိုးတှမှော ပိုးရှိမရှိ ပြားတှကေို အနံ့ခံ ခိုငျးလို့ရတဲ့ အတှကျဖွဈပါတယျ။”
ဒီလို ဗိုငျးရပျဈပိုးရှိမရှိ စမျးမယျဆိုရငျ စမျးသပျမှုအဖွကေို မိနဈပိုငျး အတှငျးမှာပဲ ထုတျပေးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခုထကျပိုပွီး သငျပေးနိုငျအောငျ ပိုကောငျးတဲ့ လကေ့ငျြ့တဲ့စကျရအောငျ လုပျဖို့လိုတယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။
"ပြားတှကေို လကေ့ငျြ့ပေးဖို့ အခြိနျသိပျမလိုပါဘူး၊ တလလောကျ အတှငျးမှာပဲ ရနိုငျပါတယျ။ အခကျဆုံး အပိုငျးကတော့ ပြားတှကေို ဒီလိုလုပျဖို့ လကေ့ငျြ့ပေးနိုငျတယျ ဆိုတာ ပွဖို့ပါ။ ဒီလို ပွနိုငျပွီဆိုရငျ ရှဆေ့ကျ လုပျဖို့သိပျမခကျတော့ပါဘူး။ ဒီ့အတှကျ ပြားတှကေိုထညျ့ပွီး ထိနျးထားနိုငျမယျ့ လကေ့ငျြ့တဲ့စကျကို ခုထကျပိုကောငျးအောငျ လုပျဖို့ - ထှငျဖို့လိုပါတယျ။”
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပိုးရှိမရှိ စမျးသပျတဲ့နရောမှာ အဖွရေဖို့ နာရီနဲ့ခြီပွီးစောငျ့ရသလို တခါတလေ ရကျနဲ့ခြီပွီး ကွာလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပြားနဲ့ စမျးသပျရငျတော့ အဖွကေို ခကျြခငျြးပဲ ရနိုငျတာပါ။ ဒီလို ပြားနဲ့စမျးသပျတဲ့နညျးဟာ ငှကေုနျကွေးကလြညျး သိပျမမြားတဲ့ အတှကျ ဗိုငျးရပျဈစမျးသပျတဲ့ ပစ်စညျး kits ရဖို့ ခကျခဲတဲ့ နိုငျငံတှေ အတှကျ သိပျကို အသုံးတဲ့နိုငျတယျလို့လညျး သုတသေန ပညာရှငျတှကေ ပွောပါတယျ။
ဘယျလျဂြီယံနိုငျငံ Ghent တက်ကသိုလျ ပြားမှေးမွူရေးဌာန အကွီးအကဲ ဇီဝဗဒေပါမက်ေခ Dirk de Graaf ဂရပျဖျ ကတော့ အခုလို အငျးဆကျပိုးတှနေဲ့ အနံ့ခံခိုငျးတဲ့ နညျးကို အမရေိကနျနိုငျငံက ကာကှယျရေးဌာနမှာ ထိထိရောကျရောကျ စမျးသပျနတော ဖွဈပွီး ဒါဟာ ၁၉ ၉ ၀ နှဈတှေ အတှငျးမှာ ဖေါကျခှဲရေးပစ်စညျးတှေ၊ ဓါတုအဆိပျတှရှေိမရှိ ထောကျလှနျးတဲ့ နရောမှာ သုံးခဲ့တာ ဖွဈကွောငျးပွောပါတယျ။ သူ့အနနေဲ့ ဆိုရငျတော့ Covid 19 အတှကျ သမရိုးကနြညျးတှသေုံး စမျးသပျတာကိုပဲ သဘောကတြယျလို့ ပွောပါတယျ။
"ဒီ အကွံက သိပျကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီရောဂါပိုး ရှိမရှိ စမျးသပျဖို့အတှကျ ပြားကို သုံးတာထကျ လုပျရိုးလုပျစဉျ ပစ်စညျးတှသေုံး စမျးသပျတာကို ကနြျောပိုကွိုကျပါတယျ။ ကနြျောက ပြားတှကေို သိပျခဈြပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ကို Covid 19 ပိုး ရှိမရှိ စမျးဖို့ သုံးမယျ့အစား တခွားကိစ်စတှေ အတှကျပဲ ကနြျောသုံးခငျြပါတယျ။"
ဒါ့အပွငျ ဒီကပျရောဂါဗိုငျးရပျဈပိုးအတှကျ လုပျရိုးလုပျစဉျအတိုငျး တိုကျရိုကျပဲ. ဗိုငျးရပျဈရှိမရှိ စမျးသပျတာကပဲ စိတျခရြမယျလို့ သုံးသပျပါတယျ။
"ဒီမှာတှရေ့တာကတော့ ဒီပြားတှကေ ရောဂါ အကူးစကျခံရသူ ဆီက ထှကျတဲ့ အနံ့ကိုပဲ ခံကွတာပါ။ အခုလို ပြားနဲ့ စမျးသပျတာက တိုကျရိုကျစမျးတဲ့နညျးမြိုးမဟုတျပါဘူး။ တိုကျရိုကျပိုကတြဲ့နညျးက COVID-19 ပိုးရှိမရှိ စမျးသပျတဲ့ကရိယာတှနေဲ့ လုပျရိုးလုပျစဉျ စမျးသပျတဲ့ နညျးတှပေါ။ ဗိုငျးရပျဈပိုးရဲ့ အနအေထား အသှငျအပွငျ ဒါမှမဟုတျ ဗိုငျးရပျဈပိုးရဲ့ မြိုးဗီဇကို စမျးသပျတာမြိူးပါ။”
ပြားရညျထုတျပေးတဲ့ ဒီပြားကောငျလေးတှနေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ တိုကျဖကျြရေး အတှကျ ဗိုငျးရပျပိုးစဈဆေးတဲ့ စမျးသပျစဈဆေးမှုတှေ လုပျနသေလို ဒီပြားထှကျပစ်စညျး ဖွဈတဲ့ ပြားရညျ၊ ပြားဖယောငျး၊ ပြားအဆိပျ တှသေုံးပွီး ဒီရောဂါကို ကုသပေးနိုငျဖို့ သုတသေနတှေ လုပျနကွေတယျ ဆိုတာ တငျပွရငျး ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာ ကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။